Nnwere onwe nke ndị nta akụkọ | Martech Zone
Mọnde, Jenụwarị 29, 2007 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Izu a na-adọrọ mmasị gbasara Weebụ. M kwenyesiri ike na ma ikekete na nnwere onwe. Ha bụ akụkụ abụọ nke nlezianya anya. Enweghị nnwere onwe, ndị ọgaranya ga-achị. Na-enweghị ikeketeorie, ị gaghị enwe ohere maka akụ na ụba.
Ndezigharị Mbụ nke Iwu: Ndị Congress agaghị enwe iwu ọ bụla gbasara nguzobe nke okpukpe, ma ọ bụ machibido mmemme ya n'efu; ma ọ bụ igbochi nnwere onwe ikwu okwu, ma ọ bụ nke akụkọ; ma ọ bụ ikike ndị mmadụ na-agbakọ n'udo, na ịrịọ gọọmentị maka mmezi nke mkpesa.
Ọ dị mkpa icheta na mgbe e dere Iwu ahụ, "ndị na-ebipụta akwụkwọ akụkọ" bụ ụyọkọ nke ụmụ amaala ndị na-adịghị ahụkebe ndị nwere akwụkwọ akụkọ rutimentary. Ha abughi oke ulo oru nke ndi mmadu na-aru ahia di egwu dika ha di n'oge a. “Akwụkwọ akụkọ” na-abụkarị okwu nkatọ, otu akwụkwọ, nke na-ewetara gọọmentị nkụja. Akwụkwọ akụkọ kacha ochie, bụ Hartford Courant, ka Thomas Jefferson gbara akwụkwọ maka ịgba akwụkwọ… ọ tụfuru.
Adaala? Ọ kwesịrị. Ọ dị ọtụtụ ịnwe, sịnụ, weebụsaịtị ma ọ bụ blọọgụ. Nke a bụ ihe na - esote “Pịa” na ntanetị dị mfe nwere ike ịdị ka akwụkwọ akụkọ anyị mere na afọ mbụ nke mba anyị. Ọgbakọ dị ka Nchịkwa Electronic Frontier Foundation gbaa mbọ hụ na a nọgidere na-echebe nnwere onwe ndị ahụ. Legodị anya na ebe nrụọrụ weebụ EFF ma ị ga-ahụ ọtụtụ ihe atụ nke nnukwu azụmaahịa na-anwa ịchọta obere nwa ahụ.
Mgbe ego ahụ gachara, akụkọ ahụ agbanweghị ọ bụghị ya? A na - ahụta ndị nta akụkọ NBC ka ha na-amapụ jets na ndị mgbasa ozi, esemokwu nke ọdịmma. Ndị otiegwu na-echefu ụbọchị onye na-enweghị ekele maka nka ha, ha na-akwado ya RIAA ịlụ ọgụ iji nọgide na-akpakọba ọtụtụ nde ka Cristal wee nwee ike na-asọ ma na-esote bling nwere ike zụta. Na weebụsaịtị na ụlọ ọrụ ịntanetị na-eme ka ọtụtụ nde chefuo na ha malitere site na otu iti, otu ntughari.
Izu a na-adọrọ mmasị. Anọ m na-ele anya ka Robert Scoble guzo ọtọ, mgbe ụfọdụ ọ ga-esitụrụ ike, iji hụ na ejirila kredit na webụ rụọ ebe ọ kwesịrị. Robert na-enyocha onwe ya ma kweta na ọ na-emekwu ntakịrị ma chefuo ebe ọ malitere. Ọ dị mma ịhụ nke a.
M na-elekwa anya ka GoDaddy na-abanye ma bipụ otu n'ime ndị ahịa ha na nnukwu ụlọ ọrụ. O doro anya na GoDaddy gaara enwe mgbe mee nke a na nnukwu onye ahịa. Ha tụlere ihe ọghọm dị na ya, ma chee na ha na-efesa anwụnta n'aka ha. Nsogbu ya bụ na ha fepụrụ anwụnta na-ezighi ezi. Ugbu a ha nwere NoDaddy obibi. (Nkwupụta zuru ezu: Emere m logo na saịtị NoDaddy n'abalị a.)
Google ugbu a kwetara na ha mehiere iji mepee azụmaahịa ha na China site na nyocha nyocha ha. Egwu. Obi dị m ụtọ na ha ghọtara otú nke a si eweghachi oge nke oge na ndị a na-emegbu emegbu inweta nnwere onwe.
Ekele dịrị maka nnwere onwe nke ndị nta akụkọ! Na-ekele ịdị mma maka Nnwere onwe nke Internetntanetị!